Times24 Nepal » मुकुन्दे भन्छन : सेटिंगमा करोडपति बनाइयो, माडेलाई जिताउने प्री प्लानै हो यो भिडियो हेर
मुकुन्दे भन्छन : सेटिंगमा करोडपति बनाइयो, माडेलाई जिताउने प्री प्लानै हो यो भिडियो हेर
को बन्छ करोडपति को हिजोको श्रृंखलामा मोरङका राजिब जैनले एक करोड जित्न सफल भएका थिए। को बन्छ करोडपति सिजनको वानको एक करोड जित्ने पहिलो व्यक्ति राजिबको खेल्ने शैली र ज्ञानको सा विषयमा सामाजिक संजालमा चौतर्फी प्रसंशा भइरहेको छ। हरेक प्रश्नको उत्तर दिदा उनले लगाउने गरेको लजिकलाई सबैले तारिफ गरेका छन। त्यति मात्र नभएर नेपाली मिडियाहरुमा यतिबेला राजिव छाइरहेका छन।
तर आफ्नो अभिव्यक्ति कै कारण चर्चा र विवादमा आइरहने मुकुन्द घिमिरे उर्फ मुकुन्देले भने यसमा फरक तर्क दिएका छन् । उसोत हरेक विषयमा अरुको भन्दा मुकुन्देको फरक तर्क नै हुन्छ । उनले को बन्छ करोडपतिमा बास्तबिक खेल नभई सेटिङ्ग मार्फत एक माडेलाई करोडपति बनाइएको कुरा आफ्नो टुइटर मार्फत ट्विट गरेका छन् ।
उनको टुइट जस्ताको तस्तै
को बन्छ करोडपति एक्टिङ थियो पैसा बाँडेर लिनेे सेटिङ थियो कलाकारले देखाएको कला नै हो माडेलाई जिताउने प्री प्लानै हो।
चुहिएका प्रश्नहरु र घोकन्ते उत्तरहरुको सुटिङ नसकिंदै बजारे जम्बो चेक कसरी तयार भयो ?चेकको फ्लेक्स बोर्ड बनाउनका लागि केही दिन अघिदेखि वा केही घण्टा अघि नै अर्डर दिनुपर्छ, करोड लेनदेन गर्ने दुवै कलाकारहरुले अभिनय नै गरेका हुन् भन्ने प्रष्ट देखिएन र ?
१५ प्रश्नका उत्तर दिएर हुनेभए विपीले किन पार्टी खोल्थे ? मदन भण्डारीले किन संगठन बनाउँथे ? मुकुन्दल्याण्डको अभियान किन चाहिन्थ्यो ? Question Out भएर करोडपति हुनेभए लाखौं युवाहरू प्यारी स्वास्नी छोडेर कुल्ली हुन अरब मलेसिया कोरिया र भाँडा माझ्न युरोप अमेरिका अष्ट्रेलिया किन पुग्थे ? करोडपति बनाउन कानेखुसी गर्छ कलाकारको कला बुझ्न चनाखो हुनुपर्छ। कहिले आँखा झिम्काउँछ कहिले पानी खान्छ, कोडभाषाका संकेतहरु खुरुखुरु मान्छ, माडेलाई करोड भनेर आधा दिंदा हुन्छ। ५०% कमिसन लिएर संचालक विदा हुन्छ।
माडवारी समुदायले लोकसेवा पनि भिड्दैन, कहिल्यै अर्काको जागिर पनि खाँदैन करोडपति व्यापारी सोधिएका जति सबै प्रश्नहरुको विज्ञ कसरी भयो? पक्कै पनि अग्रिम क्वोइसन आउट गरिएको थियो कलाकारले देखाउने कला नै हो। माडेलाई जिताउने प्लान नै हो।